Kule mihla, ukuqala Imveliso yemveliso yezichumiso eziphilayo phantsi kwesikhokelo sesicwangciso esifanelekileyo seshishini sinokuphucula ukubonelelwa kwesichumisi esingonakalisiyo kumafama, kwaye kuye kwafumaniseka ukuba izibonelelo zokusebenzisa isichumiso sezinto eziphilayo zingaphezulu kakhulu kweendleko zokusekwa kwezityalo zezichumiso zezinto eziphilayo, kungabhekiseli kuphela kwizibonelelo zoqoqosho, kodwa kubandakanya okusingqongileyo kunye nokusebenza kakuhle kwezentlalo. Ukutshintshainkunkuma yezinto eziphilayo kwizichumiso eziphilayo inokunceda amafama ukuba andise ubomi bomhlaba, aphucule umgangatho wamanzi, andise imveliso yezityalo kwaye ekugqibeleni andise isivuno. Ke kubalulekile ukuba abatyali mali kunye nabavelisi bezichumisi bafunde indlela yokwenza inkunkuma kwisichumisi kunye nendlela yokuqalisa ishishini lezichumiso eziphilayo. Apha, u-YiZheng uza kuxoxa ngamanqaku afuna ukuqwalaselwa kwezi zinto zilandelayo xa uqalaisichumiso sezinto eziphilayo.
Kutheni le nto ufuna ukuQala inkqubo yokuThengisa isichumiso sendalo?
Ishishini lezichumiso zeOrganic linenzuzo
Ukuhamba kwehlabathi kushishino lwezichumisi kukhomba kwindalo ekhuselekileyo nakwimanyolo eyandisa isivuno sezityalo kunye nokunciphisa iimpembelelo ezingapheliyo kwindalo esingqongileyo, emhlabeni nasemanzini. Elinye icala, liyaziwa isichumiso semvelo njengento ebalulekileyo kwezolimo enokubakho kwintengiso enkulu, ngophuhliso lwezolimo, izibonelelo zesichumiso sezinto eziphilayo ngokuya zibonakala. Kule mbono, kunenzuzo kwaye kunokwenzeka ukuba usomashishini / abatyali maliQalisa ishishini lezichumiso eziphilayo.
Kule minyaka idlulileyo, oorhulumente babonelele ngenkxaso yephulo lezolimo lwezinto eziphilayo kunye neshishini lokuchumisa, kubandakanya utyalo-mali ekujoliswe kulo, utyalo-mali lwentengiso, ukwandisa amandla kunye noncedo lwezezimali, konke oku kunokukhuthaza ukusetyenziswa ngokubanzi kwezichumiso eziphilayo. Umzekelo, urhulumente wase-India ubonelela ngonyuselo lwezichumiso eziphilayo ukuya kwi-Rs.500 / ngehektare nganye, kwaye eNigeria, urhulumente uzibophelele ekuthatheni amanyathelo afanelekileyo okukhuthaza ukusetyenziswa kwesichumiso sezinto eziphilayo ukuze kuphuhliswe inkqubo yezolimo yaseNigeria yokudala uzinzo. imisebenzi kunye nobutyebi.
AUkwazisa ngokutya okuphilayo
Abantu baya besazi ngakumbi ngokhuseleko kunye nomgangatho wokutya kwemihla ngemihla. Imfuno yokutya okuphilayo ikhule kule minyaka ilishumi idlulileyo. Isisiseko sokukhusela ukhuseleko lokutya ngokusebenzisa isichumiso esilawulayo ukuthintela imveliso kunye nokuphepha ungcoliseko lomhlaba. Ke ngoko, ukwanda kokuqonda kokutya okunezinto eziphilayo nako kuluncedo ekuphuhlisweni kwemveliso yemveliso yezichumiso.
Pizinto eziluhlaza ezininzi zezichumiso eziphilayo
Kukho umthamo omkhulu wenkunkuma eveliswa mihla le kwihlabathi liphela. Ngokwezibalo, kukho ngaphezulu kwe-2 yezigidi zezigidi zeetoni zenkunkuma kwihlabathi jikelele ngonyaka. Izinto zokwenza imveliso yokuvelisa isichumiso sezinto eziphilayo zininzi kwaye zibanzi, ezifana nenkunkuma yezolimo, njengotshani, isidlo seembotyi zesoya, isidlo sangokuhlwa kunye nentsalela yamakhowa), imfuyo kunye nomgquba weenkukhu (njengobulongwe beenkomo, umgquba wehagu, umgquba wehashe, umgquba wehashe kunye nomgquba wenkukhu) , inkunkuma evela kwimizi-mveliso (njenge-vinasse, iviniga, intsalela, intsalela yecassava kunye nomlotha weswekile), inkunkuma yasekhaya (njengenkunkuma yokutya okanye inkunkuma yasekhitshini) njalo njalo. Zizinto ezininzi ezibonakalayo ezenza ukuba ishishini lesichumiso somhlaba lidume kwaye lichume kwihlabathi.
Uyikhetha njani indawo ekuyo
Indawo ecetywayo yeZityalo zeOrganic
Ukukhetha indawo ekuyo isichumiso sezinto eziphilayo kufuneka ilandele imigaqo:
● Kufuneka ibekwe kufutshane nonikezelo lwempahla eluhlaza imveliso yezichumiso eziphilayo, ejolise ekunciphiseni iindleko zothutho kunye nongcoliseko lokuhamba.
● Ifektri kufuneka ibekwe kwindawo enezothutho ezifanelekileyo ukunciphisa umngeni wokusebenza kunye neendleko zothutho.
● Umlinganiselo wesityalo kufuneka wanelise iimfuno zenkqubo yetekhnoloji yokuvelisa kunye nolwakhiwo olufanelekileyo kwaye ushiye indawo efanelekileyo yophuhliso olungaphezulu.
● Gcina kude nendawo yokuhlala ukunqanda ukubuchaphazela ubomi babahlali kuba kukho ivumba elikhethekileyo elingaphantsi okanye elincinci elivelisiweyo ngexesha lokuveliswa kwesichumiso semveliso okanye izinto zothutho.
● Kufanele ibekwe kwiindawo ezithe tyaba, igeology, itafile yamanzi ephantsi kunye nokungenisa umoya kakuhle. Ukongeza, kufanelekile ukunqanda indawo ezithanda ukutyibilika kwisikhukula, isikhukula okanye ukuwa.
● Isiza kufuneka silungelelaniswe neemeko zengingqi nolondolozo lomhlaba. Sebenzisa ngokupheleleyo umhlaba ongasebenziyo okanye inkqantosi kwaye awuhlali kumhlaba wokulima. Sebenzisa indawo yoqobo engasetyenziswanga kangangoko kunokwenzeka, emva koko unokunciphisa utyalomali.
● Inkqubo isichumiso sezinto eziphilayo kukhethwa uxande. Indawo yeFektri kufuneka ibe malunga ne-10,00-20,000㎡.
● Isiza asinakuba kude kakhulu neentambo zombane ukwenzela ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunye notyalo-mali kwinkqubo yokuhambisa umbane. Kufanele ukuba ikufutshane nonikezelo lwamanzi ukuze ikwazi ukuhlangabezana neemfuno zemveliso, amanzi aphilayo kunye nomlilo.
Ngamafutshane, imithombo yolwazi ifuna ukuseka ishishini, ngakumbi umgquba weenkukhu kunye nenkunkuma yezityalo, kufanele ukuba ifumaneke ngokwenyani kwindawo yentengiso kunye nakwiifama zeenkukhu kufutshane nesityalo esicetywayo.